Aynu Ku Qarinno Beddelka ACME Koraaya | Laga soo bilaabo Linux
Aynu ku qarinno beddelka ACME sii kordhaya
Iyadoo tirada badan ee weerarada lagu bartilmaameedsanayo degellada, looma baahna in la xasuusto taas mid ka mid ah dariiqooyinka lagama maarmaanka ah Si looga hortago weerarada nuucaan oo kale ah ayaa ah qaadashada tillaabooyinka amniga sida sirta websaydhka.
Waxay ku jirtaa xaaladdan adeegyada bulshada ayaa la bilaabay sanadkii 2015 oo ka socda hey'adda shahaadada Aynu Encrypt, kaas oo bixiya qalab jihadaan iyadoo la siinayo qalab iswada si loogu rakibo loona cusbooneysiiyo shahaadooyinka bilaashka ah. loogu talagalay borotokoolka sirta TLS.
Si loo fududeeyo keenista iyo korsashada HTTPS ee shabakadda, Maamulka adeegsaday xeelado kala duwan. Tusaale ahaan, iyada oo loo marayo nooca 2-aad ee borotokoolka ACME (Iswada Maareynta Shahaadada otomaatigga ah), waxay siisay "shahaadooyin duurjoogta ah" oo bilaash ah illaa Maarso 2018.
Waxaa loogu talagalay inay ilaaliyaan lambar kasta oo hoosaadyo ah 'aasaas aasaasi ah. Si kale haddii loo dhigo, shahaadooyinkan guud, maamuleyaashu waxay u isticmaali karaan hal shahaado iyo lammaane furaha ah degmo iyo dhammaan hoosaadyadeeda, oo mar dambe shaqsi ahaan looma diiwaangelin doono shahaado cinwaan kasta oo cinwaan ah sidii xaalku ahaa illaa hadda. 'waqtigaas.
Aynu Encrypt u qaybin mug weyn oo shahaadooyin bilaash ah maalintiiba sanadka 2016, mararka qaarkoodna ka sarreysa sumadda shahaadada 100.000 maalin kasta. Dhamaadka Juun 2017, hay'addu waxay muujisay inay dhaaftay 100 milyan oo shahaadooyin tan iyo markii la bilaabay bishii Diseembar 2015. Aynu xusuusnaano in Febraayo 2017, Aan Encrypt isticmaalnay 13,70% dhammaan diiwaangelinta Faransiiska.
Bishii Febraayo 2020, Aynu Encrypt soo sheegnay in XNUMX bilyan oo shahaado ah aan gaarsiinay shabakadda. Ogeysiiska waxaa ku sameeyay Josh Aas iyo Sarah Gran bogga shirkadooda:
“Waxaan soo saarnay shahaadadeena 27 bilyan ee Febraayo 2020, XNUMX. Waxaan u adeegsan doonnaa lambarkan tirada badan ee wareega ah fursad aan ku milicsan karno waxa innaga beddelay iyo internetka, ee horseeday dhacdadan. Gaar ahaan, waxaan rabnaa inaan ka hadalno wixii dhacay tan iyo markii ugu dambeysay ee aan ka hadalnay shahaadooyin badan: boqol milyan.
“Hal shay oo hadda ka duwan sidii hore ayaa ah in shabakaddu aad uga sir badan tahay sidii ay ahaan jirtay. Bishii Juun 2017, qiyaastii 58% ee xamuulka bogga waxay isticmaaleen HTTPS adduunka, 64% Mareykanka. Maanta, 81% xamuulka bogga waxay isticmaalaan HTTPS adduunka oo dhan, annaguna waxaan joognaa 91% Mareykanka! Waa guul la yaab leh. Waa wax badan asturnaanta iyo amniga qof walba.
Iyadoo loo marayo ACME, ZeroSSL waxay ku biirtay kooxda yar ee maamulka shahaado Waxay bixiyaan shahaadooyin 90-maalmood oo bilaash ah iyada oo loo marayo ACME. Sida lagu sheegay bogga, waxaad ikhtiyaar u leedahay inaad ku ilaaliso boggaga internetka adoo adeegsanaya shahaadooyinka SSL muddo 90 maalmood ah oo aan qiimo lahayn adoo iska diiwaangelinaya qorshaha bilaashka ah ee ZeroSSL. Xaqiijinta shahaadada waxay qaadataa dhowr daqiiqo oo rakibistuna waa u fududahay sida ay ula socoto tilmaamaha tallaabo kasta oo jidka loo maro.
Isticmaalayaasha sidoo kale waxay dhisi karaan kalsooni, hubi macaamil macaamil isla markaana kahortag hanjabaadaha shabakadda adoo adeegsanaya hal sano ZeroSSL Premium SSL shahaadooyinka hal ama in ka badan oo domains ah, kuwaas oo taageeraya shahaadooyinka duullimaadka waxayna qaataan wax ka yar 10 daqiiqo si loo rakibo.
Ku shaqeynta borotokoolka SSL waxay u oggolaaneysaa inay hubiso is-weydaarsiga xogta ee u dhexeeya websaydhka iyo isticmaaleyaasha internetka. Amniga oo muhiim u noqday indhaha dadka isticmaala.
Borotokoolka ACME (oo u taagan Deegaanka Maaraynta Shahaadada otomaatiga ah, macno ahaan "Deegaanka Maaraynta Shahaadada otomaatiga ah") waa borotokool isgaarsiineed oo lagu shaqeynayo isweydaarsiga u dhexeeya maamulka shahaadooyinka iyo milkiilayaasha server-ka.
Helitaanka mas'uuliyiin badan oo shahaado si ay u taageeraan ACME sidan oo kale maahan wax ku saabsan weydiinta joojinta isticmaalka Aynu Encrypt, laakiin ku saabsan kala duwanaanshaha nidaamka deegaanka iyo ka dhigista mid lagu kalsoonaan karo.
Aynu 'Encrypt' ku jiri karno xaalad musiibo (laga soo bilaabo qalad fudud ilaa go'aanka joojinta hawlgallada).
Wax kastoo dhaca, xitaa haddii xaalad musiibo aysan dhicin, marwalba way kafiican tahay ikhtiyaarro tanina waa waxa bixiya sida ZeroSSL dalab.
Sidoo kale waa inaad tixgelisaa sida ay u fududahay in la beddelo AC-yada, taas oo noqon karta hawl yar.
Wadada buuxda ee maqaalka: Laga soo bilaabo Linux » Noticias » Aynu ku qarinno beddelka ACME sii kordhaya
Arcan, oo ah qaab loo abuuro GUI iyo bay'ad desktop ah